June 2017 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Samsung တွေ Adb Mode ကနေ FRP Lock ဖြည်နိုင်မယ်၊ Samsung Model အားလုံး Support မပေးနိုင်ပေမယ့် တော်တော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားပါတယ်.. dll ဖိုင်တွေ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင် Internet ပေါ်ကနေ Download ဆွဲလိုက်ပါ.. အခြား Model များ Support မပေးပါ လို့ မူရင်း ရေးသားသူက ဖေါ်ပြထားပါတယ်...
Credit : Ahmed Hossam Anpar
Download GPTTeamFRPTool V1.0 Beta.7z : 14.02 Mb
Lock/Unlock Phone Application Xiaomi နည်းလမ်းများ
Redmi 3X, Redmi 4A တွေ Account lock ကျရင် ဖြေရှင်းနည်း
Maung Pauk at 3:34:00 PM 0
emmcdl.exe ကို အောက်က link ကနေ downလိုက်
emmcdl ရှိပြီဆိုရင် နောက်ထပ်လိုတာက Flash programmer file flash programmer file ကို firmware ထဲကနေ ယူလိုက်...
emmcdlနဲ့ flashprogrammer ကို folder တစ်ခုထဲမှာအတူတူထား..
ဖုန်းကို 9008 mode ၀င်လိုက်ပါ...
ပီးရင် Shift+Right click နဲ့ open command window here
cmd box ပေါ်လာပြီဆိုရင် emmcdl -l နဲ့ comport အရင်စစ်ပီးရင် စမယ်
emmcdl -p COM* -f FlashProgrammer -e persist
ဥပမာ ကျနော်က redmi 4A ကိုဖြည်မှာဆိုတော့
emmcdl -p COM31 -f prog_emmc_firehose_8917_ddr.mbn -e persist ပေါ့
အဲ့တာပီးရင် ကျနော်တို့ persist ကို format ချတဲ့အပိုင်းတော့ ပီးသွားပြီ
အဲ့အဆင့်ပီးတာနဲ့ ဖုန်းကို power ပြန်ဖွင့်လိုက် acc lock ပြုတ်နေလိမ့်မယ်
ဒါပေမယ့် wifi error တက်နေလိမ့်မယ် စိတ်မပူပါနဲ့ .. ဖုန်းကို sim card ထည့် online ဖွင့်ပြီး mi account ၀င်လိုက်ပါ .. account ၀င်လို့ရသွားပါမယ်
account ၀င်ပီးတာနဲ့ ဖုန်းကို 9008 mode ကိုပြန်ဝင်ပြီး persist ကိုပြန် flash ပါမယ် ( wifi ပြန်သုံးလို့ရအောင်လို့ပါ ).. firmware ထဲက persist ကိုပြန် flash ပေးရမှာပါ
ပြန်ပြီး Flash မယ့် command က
emmcdl -p COM31 -f prog_emmc_firehose_8917_ddr.mbn -b persist persist.img နဲ့ ပြန် flash ပေးလိုက်
ပီးရင် power ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ. account လဲဝင်လို့ရပြီး wifi error မတက်ဘဲနဲ့ account lock ဖြည်ပြီးသွားပါပြီ...
ဒီနေရာမှာ 9008 port က ကျနော့်ကွန်ပျူတာမှာ 31 မို့ 31 နဲ့ပြထားတာပါ..
အကိုတို့ကွန်ပျူတာမှာ comport စစ်ပီး ပေါ်လာတဲ့ comport ကိုသုံးရမှာပါ
prog_emmc_firehose_8917_ddr.mbn ကလဲ redmi 4A ထဲကသုံးထားတာပါ
ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ model အလိုက် flashprogrammer နေရာမှာသုံးရမယ့် နာမည်က အပြောင်းအလဲ ရှိမှာပါ..
Batch File နဲ့ တစ်ဖိုင်ချင်း Run နိုင်အောင် အောက်မှာ Script File Download လုပ်နိုင်ပါတယ်..
Credit to : Phyo Nyi Nyi & EPI
Maung Pauk at 3:17:00 PM 0
Mi Account Lock တွေကို 9008Mode ကနေဖြုတ်နိုင်မယ့် OMH Mi Account Unlocker Beta2ဗားရှင်းသစ်ထွက်လာလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
Support ပေးတဲ့ Model တွေကတော့
Developed By = Omh Min Htet
Download OMH Mi Account Unlocker Beta 2.rar : 1.7 Mb
Maung Pauk at 11:44:00 PM 0
ဖုန်း Service သမားတွေအတွက် NCK Dongle Crack Installer တွေပါ... Rar မဖြည်ခင် Antivirus တွေ ပိတ်ထားရပါမယ်.. Install လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ Antivirus ပြန်ဖွင့်ပြီးသုံးနိုင်ပါပြီ...
Download NCK Dongle 7.0.2 Crack : 17.41 Mb
Download NCK Dongle Crack MediaTak : 43.43 Mb
Download NCK Dongle Crack Qualcomm : 45 Mb
ဖိုင်နာမည်တွေရဲ့အဆုံးမှာ Rar ဖြည်ဖို့ Password တွေပါ ပါတယ်...
Credit : Min_Oaker
Maung Pauk at 4:38:00 PM 0
Windows သုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ Boot Partition မဟုတ်တဲ့ Partition တွေကို Explorer မှာ မမြင်ရအောင် လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ဖျောက်နိုင် ပြန်ဖေါ်နိုင်ပါတယ်.. ဘာ Software မှ မလိုအပ်ပါဘူး.. command prompt (CMD) ကိုပဲ သုံးပြီး ဖျောက်နိုင်ဖေါ်နိုင်ပါတယ်.. Windows တင်ထားတဲ့ Partition ကိုတော့ လုပ်လို့မရပါဘူး.. ပုံမှန်အားဖြင့်ဆို C:\_ ကိုဖျောက်လို့မရဘူးပေါ့... ဘယ်လိုလုပ်သလဲကြည့်ရအောင်...
1. Windows Key နဲ့ R ကိုတွဲနှိပ်ပြီး Run Box ခေါ်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် CMD လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ...
2. CMD (Command Prompt) ထဲရောက်လာရင် diskpart လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ... diskpart ဆိုတာ ကွန်ပျူတာမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Hard Disk တွေရဲ့ Partition တွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ command ပါ.. Diskpart ဟာ သီးခြားဘောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခွဲထွက်လာပါမယ်.. Windows 10 သုံးတဲ့သူဆို Diskpart ကိုဖွင့်မှာလားလို့မေးပါတယ်.. Yes ကိုနှိပ်လိုက်ရင် diskpart ထဲကိုရောက်ပါပြီ...
3. Diskpart ထဲမှာ list volume လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပေးပါ.. ဒါကတော့ Hard Disk မှာ ကျွန်တော်တို့ မမြင်ခဲ့ရတဲ့ Volume တွေအပါအဝင် Volume ဘယ်နှစ်ခုပါသလဲဆိုတာကို စာရင်းနဲ့ပြခိုင်းတာပါ.. ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမှာ ကျွန်တော်က Partition2ခုသာ ပိုင်းထားပေမယ့် ကွန်ပျူတာက Volume4ခု ပိုင်းထားပါတယ်. Volume0ကတော့ DvD Drive ပါ...
4. ပြီးရင် ကိုယ်ဖျောက်ချင်တဲ့ Volume ကိုရွေးပေးရပါတယ်.. ဘယ်လိုရွေးပေးရမလဲဆိုတော့ select volume .No ဖြစ်ပါတယ်... ကျွန်တော်က Volume3( Partition D) ကိုဖျောက်ချင်တဲ့အတွက် select volume3လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါတယ်.. Volume3is the selected volume ဆိုပြီး Volume3ကိုရွေးပြီးကြောင်းပြပါတယ်..
5. ကိုယ်က Drive D ကိုဖျောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် remove letter D လို့ရိုက်လိုက်ပါတယ်... DiskPart successfully removed the drive letter or mount point ဆိုပြီး ကိုယ်ဖျောက်ချင်တဲ့ Drive ကိုဖျောက်ပြီးကြောင်း ပြောပါတယ်...
ဒီနေရာမှာ သတိထားရမှာက Volume နဲ့ Letter ဖြစ်ပါတယ်.. Volume ဆိုတာက Hard Disk ကို ပိုင်းထားထဲ့ အပိုင်းအရေအတွက်အားလုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်က Hard Disk ကို Partition ၂ ပိုင်းသာ ပိုင်းထားခဲ့ပေမယ့် Windows OS က သူလိုအပ်တဲ့အတိုင်း Volume 1 နဲ့ Volume4ကို သူ့အလိုလိုပိုင်းထားပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တကယ်မြင်ရတာက Partition C နဲ့ Partition D သာမြင်ရပါတယ်... Letter ဆိုတာကတော့ Partition ကို ပေးထားတဲ့ ကိုယ်စားပြု အက္ခရာဖြစ်ပါတယ်.. Volume တိုင်းမှာ အက္ခရာနဲ့ကိုယ်စားပြုဖေါ်ပြထားတာမဟုတ်ပါဘူး.. Volume2က Letter C, Volume3က Letter D ဖြစ်ပြီး Volume0ကတော့ Letter E ဖြစ်ပါတယ်.. ခုလို Partition ဖျောက်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ Drive Letter ကိုသာ ဖျောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. Volume တစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ Letter ကိုသာ ဖျောက်လို့ရပါတယ်.. သို့သော် Windows တင်ထားတဲ့ Letter C ကိုတော့ မဖျောက်နိုင်ပါဘူး...
ဟုတ်ပြီ.. ဖျောက်တော့ ဖျောက်ထားပြီ... ဘယ်လိုပြန်ဖေါ်မလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ဖျောက်ထားတဲ့ Volume ကို ဘယ်လိုမြင်ရမလဲ...
အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အဆင့် ၁ ကနေ အဆင့် ၄ ( ကိုယ်ပြန်ဖေါ်ချင်တဲ့ Volume ကို Select လုပ်ပြီးတဲ့အဆင့်) ထိအောင် လုပ်ပါ... အဆင့် ၃ မှာ list volume ပြကတည်းက Gb ပမာဏများများနဲ့ Volume တစ်ခုဟာ Drive Letter ပျောက်နေကြောင်း သတိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်... အဆင့် (၄)ပြီးသွားလို့ ကိုယ်ပြန်ဖေါ်ချင်တဲ့ Volume ကို Select ကိုလုပ်ပြီးသွားရင် ရိုက်ရမယ့်စာသားက assign letter .No ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်က Drive Letter D ကိုပြန်ဖေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် assign letter D လို့ရိုက်လိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါတယ်... DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point ဆိုပြီး ဖျောက်ထားတဲ့ Drive ကိုပြန်ဖေါ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြပါတယ်...
ခုနက ဖျောက်ထားတဲ့ Drive D ပြန်ပေါ်လာပါပြီ...
Android Tool OPPO FIRMWARES Phone Application
Oppo ဖုန်းတွေအတွက် Firmware ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာပေးနိုင်မယ့် Oppo Model Finder 1.1
Maung Pauk at 1:50:00 PM 0
Oppo ဖုန်းတွေအတွက် Firmware ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာပေးနိုင်မယ့် Oppo Model Finder ဟာ Oppo တွေ Model လွဲပြီး Firmware ဒေါင်းမိတာမျိုးမဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်..
Model မှာ ကိုလိုချင်တဲ့ Model ကိုရွေးပြီး Download Button ကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ... ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာတော့ .Net Frame 4.0 နဲ့အထက်ကို တင်ထားရပါမယ်...
Credit : dhilip @ GSM Developer
Download Oppo Model Finder 1.1.rar : 749 Kb
Samsung Combination Firmware Big Collection (57) ဖိုင်ပါ.. ဆရာ စိုးဝင်း (New Class Mobile ) စုထားတာတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
Download Samsung Combination Firmware Big Collection
MP Firmware Link
Samsung စမတ်ဖုန်းများရဲ့ version5,6,7တွေကို Root မလိုအလွယ်ကူဆုံး မြန်မာစာ ထည့်သွင်းနည်း
Samsung စမတ်ဖုန်းများရဲ့ version 5, 6,7တွေကို Root မလိုပဲ မြန်မာစာ ထည့်သွင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ..
အောက်ကဖိုင်ကို အရင် Download လုပ်ပါ..
ဖြည်လို့ရလာတဲ့ Folder ထဲက Run.bat ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ReadMe.txt ဖိုင်ကိုဖတ်ဖို့ သတိပေးပါမယ်.. key တစ်ခုခုကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. ဖုန်းကို USB Debugging တို့ Unknown Source တို့ကို on ပေးပြီး PC နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။ bat ဖိုင်လေးမှာပေါ်နေတဲ့ usb ပုံလေပျောက်သွားပြီး Key တစ်ခုခုနှိပ်ခိုင်းပါမယ်။ ကြိုက်တဲ့ Key နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ လိုအပ်တဲ့ Application ကို install ပြုလုပ်ပေးပြီး bat ဖိုင်မှာ $ ဆိုင်းလေးနဲ့ပြနေပါမယ်။ အဲဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ အောက်ကစာတွေကို copy ယူပြီး bat ဖိုင်ရဲ့ဘားလေးကို Right Click နှိပ် Paste လုပ်ပြီ Enter နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
အဲဒီအဆင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ Morelocal2ဆိုတဲ့ Application ထဲကိုဝင်ပါ။ English ( Zawgyi ) ဆိုတာကိုရွေချယ်ပေးပြီး Keyboard ထည့်သွင်းကာ မြန်မာစာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Remark : အလုံးတိုင်းတော့ အဆင်ပြေချင်မှ ပြေပါမယ်။
Credit : Than Toe Aung
Maung Pauk at 7:17:00 PM 0
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှ ပညာရှင်တစ်ဦးသည် နှစ်ယောက်စီး အသေးစား မီနီရဟတ်ယာဉ် တစ်စီးကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီး ရဟတ်ယာဉ်နှင့် လေယာဉ်စွမ်းအင် နှစ်မျိုးဖြင့် ပျံသန်းပြနိုင်ခဲ့ကြောင်း AFP သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ GyroDrive ဟု အမည်ပေးထားသော အသေးစား နှစ်ယောက်စီး ရဟတ်ယာဉ်လေးသည် ကောင်းကင်ပေါ် ပျံအတက်တွင် ရဟတ်ယာဉ်ကဲ့သို့ ဒေါင်လိုက်တက်သွားပြီး လေထဲတွင် ပန်ကာကို လှည့်ကာ လေယာဉ်အဖြစ် ရှေ့ဘက်ကို ဦးတည်ပျံသန်းနိုင်စေရန် တီထွင်ထားကြောင်း ယင်းသတင်းက ဆိုသည်။ အသေးစား နှစ်ယောက်စီး ယာဉ်သည် ၃၂၈ ပေ အမြင့်မှ တစ်နာရီလျှင် ၁၁၂ မိုင်နှုန်းဖြင့် လူနှစ်ယောက်ကို သယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် အမြန်ဆုံး ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးများတွင် အသုံးပြုလာဖွယ် ရှိကြောင်း AFP တွင် ရေးသားထားသည်။ လေယာဉ်တစ်စီးလျှင် ရောင်းဈေးအဖြစ် အနိမ့်ဆုံး ချက်ငွေ ကိုရူနာ ၁ ဒသမ ၅ သန်း (ဒေါ်လာ ၆၃၅၀၀) ဖြင့် ရောင်းချသွားရန် စီစဉ်လျက်ရှိပြီး အမျိုးအစားအလိုက် ကိုရူနာ ၄ သန်းအထိလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း တီထွင်သူက ပြောကြားသည်။ GyroDrive ရဟတ်ယာဉ်ကို ချက်နိုင်ငံမှ လေယာဉ်မှူး ပါဗယ်ဘရီဇီးနား ဆိုသူက တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကုန်းနှင့်လေ နှစ်မျိုးသွားယာဉ်အဖြစ် ချက်နိုင်ငံတွင် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ “လူတွေက မြန်နှုန်းမြင့်ကားကို မိုးပေါ်ပျံနိုင်အောင်ပဲ တီထွင်နေကြတာ။ ကျွန်တော် တီထွင်ထားတာက အဲဒါတွေနဲ့ မတူပါဘူး” ဟု ပါဗယ်က ဆိုသည်။ မစ္စတာ ဘရာဇီးနား၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Nirvana Systemsသည် ဂျာမနီနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုထံမှ GyroDrive ပုံစံနှင့် စနစ်ကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး လေယာဉ်ပျံသန်းနိုင်ရန် ပန်ကာများအတွက် အင်ဂျင်ကို လောင်စာဆီဖြင့် လည်းကောင်း၊ ယာဉ်ကို ကားအဖြစ် မောင်းနှင်စဉ် ဘီးများ၏ လှုပ်ရှားမှုအတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်စနစ်များဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပျံသန်းမောင်းနှင်နိုင်မှုကို တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ GyroDriveယာဉ်လေးကို ၃၇၃ မိုင်အထိ ပျံသန်းနိုင်စွမ်းရှိပြီး၊ မြေပြင်တွင် တစ်နာရီလျှင် ၂၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဘရီဇီးနားသည် မကြာမီ လန်ဒန်ကို လာရောက်ပြီး သူ၏ဇနီး၊ ကလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူ လန်ဒန်မြို့ပေါ်တွင် GyroDrive ကို ပထမဆုံး လာရောက်စမ်းသပ် ပျံသန်းပြနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း AFP တွင် ရေးသားထားသည်။
Apple ရဲ့ ကမ္ဘာ့ developer ကွန်ဖရင့်ပွဲတက်လာတဲ့ ၁၀ နှစ်သား app developer ကလေးငယ်
Maung Pauk at 6:30:00 PM 0
Apple ရဲ့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံးပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ WWDC ပွဲမှာ တက်ရောက်ဖို့ ၁၀ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦး ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကလေးဟာ WWDC17 ပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြားခံရသူ developers များထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ဖြစ်ပြီး Apple CEO တင်မ်ကွတ်ကိုယ်တိုင် တလေးတစားလက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခံရသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယူမာဆိုရီရန်တို ဟာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့ နေ iOS developer တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အခုမှ အသက် ၁၀ နှစ်ပဲ ရှိသေးတာ ဖြစ်ပေမယ့် App Store မှာ အက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုအထိ ဖန်တီး ရေးသားထားပါတယ်။ ယခုတစ်ပတ် Apple ရဲ့ Worldwide Developers Conference ပွဲမှာ mini rock-star အဆင့်ရထားတဲ့ လူငယ်ပညာရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဂရမ် coding ရေးသားနည်းကို အွန်လိုင်းကနေပဲ လေ့လာခဲ့ပြီး တစ်ခြားဘယ်သူ့ ဆီကမှ မသင်ခဲ့ဖူးဘူးလို့ ယူမာက ဆိုပါတယ်။ coding ရေးနည်းစနစ်ကို ၆ နှစ်သားကတည်းက တတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက် ကိုယ်ပိုင် အက်ပလီကေးရှင်းများကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
This 10-year-old kid from Australia is at #wwdc2017 and has5apps in the App Store. pic.twitter.com/p5fgfP0Gfo
— jeffersongraham (@jeffersongraham) June 5, 2017
၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲမှာ App Store ပေါ် အက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခု ရေးတင်ခဲ့တဲ့ ယူမာဟာ Apple ရဲ့ လူငယ်ပညာသင်ဆု အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ WWDC ပွဲကို တက်ရောက်ဖို့့ဖိတ်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူမာဆိုရီရန်တိုကို Apple CEO တင်မ်ကွတ်ကိုယ်တိုင် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး ဒီကလေးရဲ့ အောင်မြင်မှုကို တွေ့ မြင်ဖို့ မစောင့်နိုင်အောင် ဖြစ်ရတယ်လို့ တောင် ဆိုခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ ယူမာဟာ ကိုယ်ပိုင် YouTube Channel ကနေ coding ရေးနည်း သင်ပြပေးနေသူဖြစ်ပြီး သူ့ ရဲ့ချန်နယ်အမည်ကို Anyone Can Code လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။
Apple ရဲ့ Scholarship program အတွက် လျှောက်ထားရာမှာ ဒီ YouTube channel နဲ့ တကွ သူဖန်တီးထားတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုကိုပါ တင်ပြခဲ့ရာကနေ အခုလို WWDC ပွဲကို ဖိတ်ကြားခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ရေးဆွဲသမျှကို ဒီဇိုင်နာနဲ့ app developer ဖြစ်တဲ့ သူ့ ဖခင် ဟန်ဒရေးကနေ ခရစ်ဒစ်ပေးပြီး App store ပေါ် တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Apple ရဲ့ အသက်အရွယ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းများအရ ယူမာကိုယ်တိုင် တင်လို့ မရတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ယူမာရဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းတွေကို Apple ရဲ့ Xcode software သုံးပြီး မိသားစုပိုင် MacBook Air ပေါ်ကနေ ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေထဲမှာ ဘဲကလေးတစ်ကောင်ကနေ ရာသီဥတုအစီရင်ခံပေးတဲ့ Weather Duck ဆိုတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းကနေ ယူမာကိုယ်တိုင် အသံထည့်ထားတဲ့ ဂဏန်းပေါင်းစက် Kid Calculator လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းအတွက် coding အားလုံးကို ယူမာကိုယ်တိုင်ရေး ၊ သူကိုယ်တိုင်ပဲ layout အခင်းအကျင်းနဲ့ လုပ်ရမယ့် function ပိုင်းတွေ ချခဲ့တာပါ။ သူ့ အဖေဖြစ်သူ ဟန်ဒရေးကတော့ အက်ပလီကေးရှင်းမှာ သုံးမယ့် ပုံတွေ ထုတ်ပေးတာလောက်ပဲ ကူညီခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ coding ရေးရင်း အခက်အခဲတစ်ခုခု ကြုံလာတိုင်း ယူမာဟာ Google ပေါ်ကနေပဲ အဖြေရှာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Credit : Duwan
Maung Pauk at 5:33:00 PM 0
မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) - သမုဒယ၀တ်ရည် ကဗျာများ-1.pdf
မောင်ဘိုသစ် - ကဗျာရေးနည်း နိသျည်း .pdf
မောင်လှမျိုး - မီးပြဇာတ်.pdf
မောင်ချောနွယ် - မောင်ချောနွယ် အတု.pdf
မောင်ခွေးဘို့ကဗျာများ.pdf
ရွှေမြိုင်ပြုံးလဲ့မော် - ပန်းတိုင်လမ်းနျင့် အခြားကဗျာများ (စာပေဗိမာန်စာမူဆုရ).pdf
အောင်ချိမ့် - ပုံပြောသူ အသည်းစွဲကဗျာဆရာ.pdf
အောင်ဝေး - လူငယ်တွေရဲ့ကဗျာ 2003.pdf
မြေလတ်မောင်မြင့်သူ - ရွှေပြည်စိုးရဲ့ တေးသံသာ ကလေးကဗျာများ.pdf
မြန်မာ ဆိုင်ဘာကဗျာစာအုပ် အမှတ် (၂ ).pdf
မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ် - ယုံကြည်ချက်-ကဗျာများ-၁.pdf
၀င်းမောင် - အပြုံးရောင်သီချင်း ကဗျာများ.pdf
ငြိမ်းလူ - လဇူလိုင်ကိုရဲဝင့်သူသာပိုင်တယ် နှင့် အခြား.pdf
နွယ်ဦးလှိုင်..ချစ်ခြင်းဖွဲ့ကဗျာများ.pdf
ကဗျာ(ရှေး ပျို အလင်္ကာ ရတုရကန်စာအုပ်များ)
၁၂ ရာသီဖွဲ့ ပေါင်းချုပ်.pdf
ဂါထာ ၆၀ ပျို့ .pdf
တောလား နှင့် ရတုများ.pdf
ဘယ်သူတင်ထားလဲတော့မသိ.. ကိုရဲနိုင်ဆီမှာ ပြန် Share ထားတာတွေ့လို့ တင်ပေးတာပါ...
>>>> အပိုင်း (၁) Download လုပ်ရန်နှိပ်ပါ..
Facebook ပေါ်မှာ ကဗျာစာအုပ်လေးတွေတွေ့လို့ ကူးလာခဲ့တယ်... ကဗျာဝါသနာရှင်တွေအတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်...
မြန်မာ ကဗျာဖွဲ့နည်း - ကဗျာဆရာ တင်မိုး
ကဗျာ - သခင်ဗသိန်းတင် - လွမ်းကြပါတော့ ရဲဘော်တို့ရေ.pdf
ကဗျာပေါင်းချုပ် - ငွေတာရီ.pdf
ခင်မြဇင် - မိုးရွာပြီးစညနေခင်း.pdf
ညွန့်ဝေ(ကသာ) ..ရင်မှဆင်းသော မြစ်တစ်စင်း.pdf
ဖန်မီးအိမ်သို့အလွမ်းစာ.pdf
မင်းသုဝဏ် - ကဗျာရေးချင်စာစပ်သင်.pdf
မင်းသုဝဏ် - အင်းလျားကန်သို့အိုကုတို့(2).pdf
မိုဃ်းဇော်၊၀င်းမြင့် - လူစီရဲ့အမှုန်အမွှားကင်းစင်တဲ့လက်ဆောင် ကဗျာများ.pdf
လူကလေးတို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေ ငှက်ကလေးတွေ.pdf
လူဇော်သစ် - ချစ်ခြင်းအားဖြင့်ချစ်ခြင်းဖွဲ့ စကားလုံးများ.pdf
ဝ ထ က လ သ .pdf
သစ္စာနီ..မိမိ အရေပြားမှ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း.pdf
သုခမိန်လှိုင် - အင်ဒီဝါးဟိုးလ်တို့ကမ္ဘာ.pdf
သုခမိန်လှိုင် - အငြိမ့်.pdf
သူရနီ..ကျောက်တုံးများကိုနေရာ ရွှေ့ ကြည့်ခြင်း.pdf
ဦးသော်ဇင် - ကျေးလက်တောရွာတေးကဗျာ.pdf
ဦးသော်ဇင် ၊ ရန်ကုန်ဘဆွေ..မိုးတိမ်တမန်.pdf
စောဝေ..ရွက်ပုန်းသီး မြို့ ပြတိုက်.pdf
ဇော်ဂျီ - ညီသစ်ဆင်း ကဗျာစု.pdf
မောင်စိန်ဝင်း - သောကခြေရာ ရတနာ ကဗျာများ.pdf
ရှည်လွန်းလို့ ဒီလောက်နဲ့ ခဏဖြတ်ထားတယ်.. ဘယ်သူတင်ထားလဲတော့မသိ.. တွေ့လာတာကို ကိုရဲနိုင်ဆီကပါ...
>>> အပိုင်း (၂) ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ..
စမတ်ဖုန်းအလုံးပေါင်း ၈၄၇၄လုံး ခိုးမှုနဲ့ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ Samsung မှ မသန်စွမ်းဝန်ထမ်းတစ်ဦး
Maung Pauk at 6:00:00 AM 0
Samsung မှ မသန်စွမ်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ စမတ်ဖုန်းအလုံးပေါင်း ၈၄၇၄လုံး ခိုးမှုနဲ့ အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ The Investor ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။
လီ လို့ခေါ်တဲ့ အဲဒီလူဟာ တောင်ကိုရီးယား ဆူဝမ်မှာရှိတဲ့ Samsung ရဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးရုံးချုပ်မှ ဟန်းဆက်တွေကို ခိုးယူနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပတ်ရစ်ဟန်းဆက်ရောင်းသူထံကို မရောင်းခင်အချိန်မှာ လက်ရဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung ဟာ မဖြန့်ချိရသေးတဲ့ဖုန်းတွေ ဗီယက်နမ်ကို ရောက်ရှိနေတာကို သတိထားမိခဲ့ပြီးတော့ ဒီခိုးမှုကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ လီဟာ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာကတေ ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာအထိ ၈၀၀မီလျံဝမ် (ဒေါ်လာပေါင်း၇၁၁၃၆၈) လောက် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
လီဟာ ဖုန်းတွေကို ရုံးပြန်ချိန်မှာ ရုံးမှာရှိတဲ့ electronic body scanner ကနေ ရှောင်ရှားပြီးတော့ သယ်နေခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက ၀ှီးချဲနဲ့ မို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သူဟာ ၉၀၀မီလျံဝမ်(ဒေါ်လာ၈၀၀၁၁၈)လောက်ကို လောင်းကစားကြွေးတင်နေတာကို ဆပ်ဖို့သုံးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါဟာ Samsung မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သူဌေး လီဂျေယောင်းကလည်း ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက လာဘ်စားမှု၊ ရေမြေခြားမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဖုံးကွယ်ထားမှုတွေအတွက် ပြစ်မှုတွေ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Maung Pauk at 9:18:00 PM 0
Adb Mode ,Fastboot Mode,9008 mode က​နေလုပ်​​ဆောင်​နိုင်​တဲ့အပြင်​ Bootloader လုပ်​ချင်​သူများအလွယ်​တကူလုပ်​နိုင်​ပါသည်​။pin/pass များအပြင်​ Frp /Mi user lock များလဲဖြုတ်​နိုင်​ပါသည်​။Apk များအလွယ်​တကူ install လုပ်​နိုင်​တဲ့အပြင်​ Xiaomi Font and Samsung 5.0 အထက်​မြန်​မာစာထည့်​သွင်းနိုင်​ပါသည်​။တစ်​ခြား​သော လုပ်​​ဆောင်​နည်းများလဲပါရှိပါသည်​​။​Tool ​လေးကိုစမ်းသုံး​ပေးကြပါ။အဆင်​မ​ပြေတာ​လေးများ​ပြော​ပေးကြပါ။အားလုံးကို​ကျေးဇူးအထူးတင်​ပါတယ်​။
Credit : MST Yangon
Download MST AiO Tools 2017 : 6.19 Mb
Password = MST
Account Lock ကျနေရင်လည်း ဖြုတ်လို့ရပါမယ်။
Miui 8.0.1မှာ စမ်းထားပါတယ်။
Credit : Mobile KSE
Download Redmi Note3 MTK Account Remove Firmware : 1.24 Gb
Password = MOBILE K.S.E
Firmware Phone Application
Maung Pauk at 1:18:00 AM 0
Coolpad 7722 တွေ Firmware မှားတင်ရင် ကင်မရာပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်. ဒီ Error ကို ရှင်းတဲ့ Firmware လေးပါ။
Uploaded By Phyo Chan (Regeneration Mobile Service & Training)
Download Coolpad 7722 Camera Error Fix Firmware : 1.06 Gb
Maung Pauk at 9:23:00 AM 0
Xiaomi ဖုန်းတွေ Lock ဖြည်ဖို့ Mi Account Unlock Files Tool လေးဖြစ်ပါတယ်.. Ko Htoo ရဲ့ လက်ရာမွန်တစ်ခုပါ... exe ဖိုင်လေးကို Run ပြီး သူ့ထဲမှာပါတဲ့ Model အလိုက် Account Lock တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါမယ်...
Credit : Ko Htoo & xiaomisamsungBasicAdvanceBook
Download Mi Account Remove Files Tool : 3.44 Mb
Maung Pauk at 8:35:00 AM 0
Phone Service Tools ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကို စုစည်းထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. အချို့ Tool တွေက နည်းနည်း ခေတ်နောက်ကျနေပေမယ့် အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေနေဆဲပါ.. လိုအပ်သူများ ရွေးချယ် ရယူနိုင်ပါပြီ...
Download Phone Service Tools Collections
Android Tool FRP Removel Solution FRP-Tools Phone Application
Maung Pauk at 8:05:00 AM 0
Samsung Galaxy SM-J700F ဖုန်းတွေကို FRP Lock ကျော်ပေးမည့် Zip File လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကနေ Odin သုံးပြီး လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး ကြာချိန်( ၂)စက္ကန့်သာ ကြာပြီး FRP Lock ကို လွယ်ကူစွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့် J7 ဟာ Exynos_cpu လား၊ Qualcomm_cpu လားတော့ သိရပါမယ်.. ကိုယ့် CPU နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ tar ဖိုင်ကိုရွေးရပါမယ်...
Credit : LoseSleep
Download Samsung Galaxy SM-J700F FRP Unlock : 148.7 Kb
Oppo OPPO ROOT Phone Application Rooting နည်းလမ်းများ
Oppo nero5 ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ သူတွေအတွက် Root ဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင် မီးနစ်အနည်းငယ်အတွင်း Root ဖောက်ပေးမဲ့ file root zip ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Storage က 16g ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး Ram က 1g ဖြစ်ရပါမယ် error မရှိ 100% အဆင်ပြေပါတယ်...
1. File root zip ကိုဒေါင်းပါ
2. ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ
3. Volume down (-) ခလုပ်နဲ့ Power ခလုပ်နဲ့
တွဲနိုပ်ပါ( Recovery Mode လိ်ု့ခေါ်ပါတယ်)
4. English language ကို နိုပ်ပြောင်းပါ
5. Install From Storage Device ကိုနိုပ်ပါ
6. From Storage Device ကိုနိုပ်ပါ
7. ဒေါင်းထားတဲ့ zip ဖိုင်က ကို နိုပ်ပြီး ရွေးပေးပါ
8.အပေါ်က မျှားလေးအတိုင်း နောက်ပြန်ထွက်ပြီး Install from Storage device နေရာမှာ Reboot ကိုနိုပ်ပေးလိုက်ပါ
9. ပါဝါပြန်တက်လာရင် Root ရရှိပါပြီး
Oppo nero5 ( 8GB တွေမှာလည်း စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်)
မှတ်ချက်- အခြားဖုန်းအမျိူးအစား လုံးဝ အာမမခံပါ..
Credit : Ye Min Oo
Download Oppo Nero5 16 Gb Root Zip : 3.06 Mb
Android Tool Lenovo Phone Application
Maung Pauk at 4:43:00 PM 0
Lenovo Model တွေ IMEI null တာတွေ၊ Network ပျောက်တာတွေအတွက် Navram ဖိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်.. ကိုသက်ထွေအောင် တင်ပေးထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
Credit : သက်ထွေးအောင်
Download Lonovo Navram Files : 1.11 Mb
Dead ဖြစ်ရင် ပြန်ကယ်တဲ့ Tool ပါ။ အောက်ကလင့်မှာသွားဒေါင်းလိုက်ပါ။ ရောင်းတဲ့ Crack ပါ။
မ၀ယ်ပါနဲ့ Free ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကျနော့်ရဲ့ M.O.F Training 2017 ထဲမှာပေးထားတဲ့ဟာပါ။
Free Share ပေးလိုက်ပါတယ်။ Password တောင်းရင် Spacebar7ကြိမ် " . " တကြိမ်ပါ ..
Credit : Ye Lin Aung ( M.O.F )
4Shared က Download လုပ်နည်းမသိရင် အောက်ကလင့်မှာကြည့်ပါ..
Download OPPO Advance Tool : 7.83 Mb
သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်း ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရှားပါးစာအုပ်လေးတွေ..
Maung Pauk at 10:54:00 AM 0
ကျွန်​​တော်​ရှာ​တွေ့မိတာ​လေး​တွေပါ​နောက်​ရက်​ထပ်​ရှာ​ပေးပါမယ်​.. ( Credit : Aung Mon Mein )..
ကျော်စွာ_၁၀၀ ( ပထမတွဲ )
မူရင်းစာအုပ် ဝယ်ယူရန်အခက်အခဲရှိသူများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းစာအုပ်များမှာ PDF ထက်ပို၍ ဖတ်ရှုရ အဆင်ပြေသဖြင့် မူရင်းစာအုပ်ကို ဝယ်ယူအားပေးရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
Android Tool IMEI null ဖြေရှင်းနည်း. Phone Application နည်းလမ်းများ
H30-U10 Dead Fix , 2004 Error , Vibrate Error , Virus Error , IMEI Error Solution
Maung Pauk at 10:36:00 AM 0
လိုတဲ့ဖိုင်တွေကို အကုန်လုံးကို အောက်ဆုံးမှာ Download လုပ်ပေးပါ။
ပြီးရင် မိမိရဲ့ဖုန်းကို 2004 Error အရင် ရှင်းရပါမည်။ ဒါမှသာ ကျန်တာ ဆက်လုပ်လုိ့ ရပါမည်။
SP Flash Tool ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ Download ထဲမှာ ပေးထားတဲ့ SP Flash Tool ကိုဘဲ အသုံးပြုပေးပါ။
ပြီးရင် Scatter Loading နေရာကနေ Honor3CBootUnlock ထဲက MT6582_Android_scatter.txt ဖိုင်လေးကို သွားရွေးပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် DA DL All With Check Sum ကို အမှန်ခြစ် ထည့်ထားပါ။
ပြီးရင် အပေါ်ဆုံးမှာ Window ထဲက Write Memory ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်မှာ Memory Test ဘေးနားမှာ Write Memory ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ အဲ့အထဲကို ၀င်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Open Raw Data ကို တစ်ချက် နှိပ်ပြီး BootunlockHonor3c ထဲက preloader_huawei82_wet_jb5.bin ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Memory Setting ထဲမှာ EMMC ကို အမှန်ခြစ်ထည့်ထားပါ။
ပြီးရင် File Size နေရာထဲက
Being Address [Hex] ထဲမှာ 0x00000800 ပြင်ရေးပါ။
Container Length [Hex] ထဲမှာ 0x0001B0EC ပြင်ရေးပါ။
ပြီးရင် Write Memory ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပြီး ကြိုးထိုးလိုက်ပါ။ ခဏအကြာလျှင် Paste ပြသွားပြီး OK ပြသွားပါလိမ့်မည်။
ပါဝါ မဖွင့်ပါနဲ့အုန်း ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါ။
ပြီးရင် H30-U10_Dead_Fix_AungMinHan.rar ထဲက Dead_Fix_Full Firmware ကို အဲ့အထဲက SP Flash Tool နဲ့ဘဲ ရေးလိုက်ပါ။ Paste ပြသွားလျှင် ပါဝါပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အကုန်လုံးကောင်းသွားပါလိမ့်မည်။ IMEI Null နေပါလိမ့်မည်။ တရုတ်စာတွေလည်း ပါနေပါလိမ့်မည်။ Android Version 4.2.2 ဘဲ ဖြစ်နေပါအုန်းမည်။
အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့က Emotion ပါတဲ့ 4.4.2 Firmware ကို တင်ပေးရပါမည်။ H30-U10_dload_Firmware ကို ဖြည်ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အထဲက dload ကို sd card ထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းကို Vol Up + Vol Down + Power သုံးခု နှိပ်ပြီး တင်လိုက်ပါ။ OK ပြသွားပြီဆိုရင် မိမိရဲ့ဖုန်းက Emotion UI နဲ့လည်း လာမည်။ IMEI လည်း ပါလာပါလိမ့်မည်။ Emotioin UI ပါလာပြီဆိုရင် မြန်မာစာကိုလည်း Emotion UI APK တွေနဲ့ ချိန်းလို့ ရပါသည်။
Language ထဲမှာ မြန်မာစာ ပါလား မပါလားဆိုတာကိုတော့ သေချာ မကြည့်လိုက်ရဘူး။ ပါခဲ့ရင်လည်း ထပ်ချိန်းစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
အချိန်းနည်းနည်းတော့ ကြာသွားပါမည်။ ဒါပေမဲ့ Dead Fix , IMEI Null , Vibrate Error , 2004 Error , Virus Error စတာတွေကို ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ် သုံးစွဲပြီး၍ အဆင်ပြေစွာ တင်နိုင်ပါသည်။
Download Dead_Fix_Firmware : 523.99 Mb
Password = AungMinHan
Download H30-U10_dload_Firmware : 1.43 Gb
ဘွဲ့မရသေးရင်တောင်မှ ဝင်ငွေကောင်းနိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်များ
ကိုယ်ကဘွဲ့မရသေးလို့ ဝင်ငွေမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ မထင်ပါနဲ့။ ဘွဲ့မရပေမယ့်လည်း ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးတွေပါသလို လခစားလုပ်ရမယ့်အလုပ်မျိုးတွေလည်းပါပါတယ်။ အခုပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေထဲက တချို့ကိုကြားဖူးနိုင်သလို တချို့ကိုလည်းနည်းနည်းစိမ်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘွဲ့ရရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။
Blogger တို့၊ Content Writer တို့ဆိုတာက ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ အင်တာနက်နဲ့အတူခေတ်စားလာတဲ့အလုပ်အကိုင်တွေပါ။ လိုတိုရှင်းပြောရရင် အွန်လိုင်းမှာစာရေးတဲ့သူတွေပေါ့။ ဒီအလုပ်တွေကို ကုမ္ပဏီတွေကခေါ်သလို ကိုယ်ပိုင် Blog တို့၊ Website တို့ထောင်ပြီးလည်း ပိုက်ဆံရှာလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ Blog/Website တို့ကို လူဖတ်များလာတာနဲ့ Google Adsense လိုမျိုးကနေ အလွယ်တကူပိုက်ဆံရနိုင်ပါတယ်။ ( မောင်ပေါက်ကတော့ ဝင်ငွေမကောင်းသေးပါဘူး.. ဤကား စကားချပ် :P )
Youtuber ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ နည်းနည်းစိမ်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Youtuber ဆိုတာက Youtube မှာ ဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့လူတွေကို ပြောတာပါ။ ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့လည်း ဘာဘွဲ့မှရဖို့မလိုပါဘူး။Pewdiepie, Superwoman, SMOSH တို့ဆိုရင် Youtube ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးရာကနေ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီရနေတဲ့သူတွေပါ။ ကိုယ့် ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူများအောင်လုပ်နိုင် ပိုက်ဆံရနိုင်လေဆိုတဲ့ အလုပ်မျိုးပါ။
ပရိုဂရမ်မာဆိုတာက အခုလိုနည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ တော်တော်လိုအပ်နေတဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုပါ။ နည်းပညာတစ်ခုမှာဆိုရင် သူတို့ကမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတွေပါပဲ။ Google လိုကုမ္ပဏီကြီးမျိုးဆိုရင်လည်း လုပ်နိုင်ကိုင်စွမ်းရှိပြီး ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင် ပညာအရည်အချင်းကိုသိပ်မကြည့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Google မှာအလုပ်ရဖို့လွယ်မယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုအလုပ်တွေခေါ်ရင် အတွေ့အကြုံများတဲ့သူကို ဦးစားပေးကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာအရည်အချင်းကန့်သတ်ထားတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ Programming Language တစ်မျိုးမျိုးကို နှံ့နှံ့စပ်စပ်ကျွမ်းကျင်မယ်ဆိုရင် တကယ်ကိုလစာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးပါ။
Hacker ဆိုတဲ့အလုပ်ကလည်း လစာများတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။ အလုပ်ခေါ်ရင် ပညာအရည်အချင်းထက် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်စွမ်းကို ပိုပြီးတော့ကြည့်တဲ့အလုပ်မျိုးပါ။ အလုပ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာ ဒီလိုအလုပ်အကိုင်မျိုးကို Security Researchers, Penetrations Testers ဆိုတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေါ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ Bug Bounty Hunters လိုအမည်နဲ့ခေါ်တာရှိသလို တခြားအမည်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ဘွဲ့ရမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ အားသာချက်ရှိပေမယ့် လက်ရှိဒီနယ်ပယ်မှာ ဘွဲ့မရဘဲအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Freelaner အလုပ်တွေကတော့ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ Freelancer ဆိုတာက အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကို ပုဒ်ပြတ်သဘောမျိုးလက်ခံပြီး သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာပြီးအောင်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကို ပြောတာပါ။ Frreelance ဆိုတာက App Developer တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သလို Web Developer တစ်ယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံဆရာ၊ ဒီဇိုင်းနာ၊ တိုးဂိုက်၊ ဘလော့ဂါ နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Freeelancer တွေအလုပ်အကိုင်ရှာပေးနေတဲ့ Chatesat လိုမျိုး ဝက်ဆိုဒ်တွေရှိနေပါပြီ။
Professional Gaming ဆိုတာ ကမ္ဘာခေတ်စားနေခဲ့တာတော်တော်ကြာနေပါပြီ။ eSports ကဏ္ဍမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူ ဂိမ်းမာတွေအတွက် ပိုက်ဆံရှာနိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေ များလာပါတယ်။ ဥပမာ DOTA လိုမျိုးပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း eSport ကဏ္ဍထွန်းကားလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအလုပ်ကလည်း နောက်ပိုင်းမှာအရမ်းခေတ်စားလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီအလုပ်တွေကလည်း အတွေ့အကြုံနဲ့လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်စွမ်းကို အဓိကထားတဲ့အလုပ်တွေပါ။ တချို့နေရာတွေမှာပညာအရည်အချင်းကန့်သတ်ထားတာရှိပေမယ့် တီထွင်ကြံဆနိုင်မှုက အဓိကလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ Adobe ကထွက်တဲ့ After Effects, Premiere Pro တို့လိုဆော့ဝ်ဝဲတွေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်နေဖို့လိုသလို အတွေးအခေါ်တွေကဆန်းသစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနေတဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုပါ။
ဒီအလုပ်တွေထဲက တော်တော်များများက မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက် မြင့်မားနေပါတယ်။ အဓိကလိုအပ်တာကကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းပါ။ ဘွဲ့မရသေးပေမယ့် အားငယ်စရာမလိုဘဲ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit : (www.akhayar.com)